Safaaradda Soomaaliya ee Suudaan oo ku guuleysatay xalinta Caqabado soo wajahay Jaaliyadda Soomaaliyeed.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ayaa cabasho ka muujinayay beryahan isbedello la sheegay in lagu sameeyey qidmadda adeegga Ciqaamada dal kujoogga ee dalkaasi Suudaan oo lacago lagu kordhiyay,taasi oo ay sheegeen in saameyn xooggan ay ku yeelatay guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed.
Safiirka Soomaaliya ee Suudaan Amb, Maxamed Sheekh Isxaaq oo u waramay Wakaaladda SONNA ayaa sheegay in ay ku guuleysteen xal u helidda cabashooyinka ay muujiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi,kadib kulan ay la qaateen mas”uuliyiin ka tirsan wasaaradda Arrimaha dibadda ee Suudaan.
” Dhamaan Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Suudaan waxaan ugu bishaareyneeynaa in Safaaraddu ay ku guuleysatey in ay xal kumeel gaar ah u heshay Arrimihii beriyahaan taagnaa ee laxariirey lacagaha lagu kordhiyay iqaamada dadka haysta Baasaboorka Soomaaliga, kadib markii aan la kulaney Jihooyinkii ay khuseeysey arrintaasi”. ayuu yiri Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq oo SONNA la hadlay.
Dhanka kale Danjiraha Safaaradda Soomaaliya ee wadanka Suudaan Mudane Mohamed sheekh isxaaq oo uu ku wehliyo uqeybsanahay arrimaha Ganacsiga Yuusuf Ahmed jeego ayaa dhawaan La kulmay maareeyaha Guud ee Hay’adda Duulista Hawada ee wadanka Suudaan Mudane Ibrahim Adalaan Ibrahim,waxayna kawada Hadleen waxyaabo khuseeya Danaha labadadal ee walaalaha ah iyo adkeynta iskaashiga,fududeynta dadka Soomaaliyeed ee dalkooda dib ugu laabanaya,maadaama Covid-19 uu dad badan xayiray.
Sidoo kale xiriika labada wadan kulankaasi ayaa sidoo kale looga hadley in ay is dhaafsadaan khibrad iyo booqosho labada Hay’adood Soomaaliya iyo Suudan,Wuxuu Safiirka ka codsadey in ay tababaro siiyaan saraakiil ka socota Hay’adda Duulista Hawada Soomaaliya.
Dalka Suudaan oo kamid ah wadamada Carabta oo xiriirka dhow la leh Soomaaliya waxaa kunool bulsho badan oo Soomaaliyeed,kuwaasi oo isugu jira Arday,Ganacsato iyo dad kale oo halkaasi deegaansanaya.